Wax ka baro isbeddellada cusub iyo noocyada kala duwan ee wax qorista 2017 | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | Design Graphic, Fuentes, Khayraadka
Akhriska ku jira aaladaha waa arin miiska saaran oo durbaba shirkaduhu jecel yihiin MIT, Google iyo nooca waxay sameynayaan cilmi baaris dheeri ah oo ku saabsan akhrinta alaabada maalinlaha ah ka dhig qoraalada la akhrin karo oo kaliya jaleecada.
1 Noocyada nooca font ee mustaqbalka
2 Laakiin maxay tahay ujeeddada shirkaddani?
3 Qoraalku waa qayb ka mid ah taariikhda aadanaha
4 Nooca qoraalka ayaa ku kala duwan hadba meesha
Noocyada nooca font ee mustaqbalka
AgeLab waa shaybaar fikradaha wax ku oolka ah oo ka tirsan machadka Massachusetts ee Teknolojiyada oo sannadihii ugu dambeeyay ku takhasusay barashada noocyada kala duwan ee qoraalka, akhriska, iyo arrimaha kale ee la xiriira naqshadeynta iyo si loo siiyo mudnaan weyn cilmi baarista noocan ah, waxay abuureen "Dalada Soo Bandhigida Macluumaadka", oo xulafo la ah Monotype-ka caanka ah, kaasoo sanado badan ku takhasusay qorista qoraalka iyo teknoolojiyada kale ee la xiriira maadada.
Xaqiiqadani waxay soo jiidatay indhaha dadka waaweyn sida Google oo si buuxda uga qayb qaadanaya mashruucan.
Laakiin maxay tahay ujeeddada shirkaddani?
Hadafka shirkadan waa in la bixiyaa natiijooyin aad u cad oo la xiriirta waxa qorista hadda jirta ay tahay iyo sida hada looga cusbooneysiiyo jilaayaasha iyo tijaabooyinka kale ee dhabta ah si loo hubiyo sharcinimada qoraalka. Xaaladaha qoraallada ayaa sidoo kale la darsay markii ay la kulmaan xaalado kala duwan sida iftiinka, deegaanka, cabbirrada waaweyn iyo kuwa yar yar iyo milicsiga.
Waxaa jira sabab cilmi baaristaan ​​waana inay si toos ah adiga kula sameysaa, haa, si sax ah ayaad u aqrisay, tan iyo qoraalada meelkasta oo aad fiiriso, qalab yar sida mobilkaaga ama saacadaada ama shay aad u weyn sida muraayadaha dhabta ah. Baabuur sidoo kale waxaad kaheli kartaa xoogaa qoraal ah gudiga xakamaynta iyo qalabka kale iyo qalabka aad isticmaasho. Qaab qoraalka maanta waa inuu la qabsadaa tan, maxaa yeelay kuma koobna oo keliya akhrinta qoraalka, laakiin wax walba waxay ku wareegayaan aqrinta oo kaliya "fiiri gaaban."
Qoraalku waa qayb ka mid ah taariikhda aadanaha
Ma aanan gaarnay heerkan horumarka ee hadda haddii qorista ay isbeddelayso waana waxa ku dhacay qarniyadan oo dhan, ilaa qaab qoriddu way isku xidhan tahay laga bilaabo wixii aan ka fikirno illaa howlaheena maalinlaha ah.
Dhamaadkii qarnigii XNUMXaad calaamadeeyay marxalad cusub oo ku saabsan qorista qoraalka waana mahad dhamaanteed waxa loogu yeero kacaanka dhijitaalka ah iyo walxaha sida daabacaadda desktop ama luuqadda daabacaadda PostScript. The Times New Roman wuxuu dhashay sanadkii 1931 si uu u jabiyo caaryada wixii xilligaa la arkay iyo tusaale ahaan, Helvetica Sannadkii 1957-kii ayaa sidoo kale la calaamadiyey ka hor iyo ka dib oo maanta saameyn weyn ayuu leeyahay.
Maanta waxaan ku noolnahay nolosheena inteeda badan waddo ama jid weyn akhriskuna waa qodob muhiim u ah arintan, marka hadii ay timaado calaamadaha akhriska, waa in lagu sameeyaa ilbiriqsiyo gudahood. Sida akhrintu waa muhiim, isirrada joogtada ah waa inay had iyo jeer ahaadaan nadiif iyo sifooyin laxiriira oo xitaa lagu aqrin karo baraf ama roob, iyo xaaladaha cimilada kale.
Nooca qoraalka ayaa ku kala duwan hadba meesha
Boqortooyada Ingiriiska dhexdeeda Qaab qoraalka gaadiidka marka laga hadlayo Spainna font u dhiganta Wadada Gothic Wadada weyn ee Mareykanka iyo Nooca taraafikada Spain waddooyinka, in kastoo mararka qaarkood aad arki karto helvetica sidoo kale.
Marka laga hadlayo Jarmalka, warqad ku qor DIN 1451 laga soo bilaabo 1936. Laakiin kiisaska oo dhan, waxa had iyo jeer la raadsadaa waa in akhrintu tahay tan ugu habboon uguna fog iyo xawaaraha arrimo ahaan.
The makiinadda qoraalka oo loogu talagalay in lagu isticmaalo qalabka moobiilka iyo in la ogaado kuwa saamaynta taban ku leh markay wax ka beddelaan cabbirka.
Haddii kahadalka xarfaha ay ka tagtay inaad rabto inaad xoogaa isku daydo wixii aad ku soo baratay qoraalkan, markaa waxaan kaaga tagi doonnaa mid caadi ah qoraal gacmeed ama gacanta lagu qoro, oo maanta moodada badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Fiiri isbeddellada farta cusub ee mustaqbalka